चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने निश्चित, चीनसँगका आयोजना अघि बढाइने
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने निश्चित, चीनसँगका आयोजना अघि बढाइने
काठमाडौं - बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत छनोट भएका आयोजना अघि बढाउन चीन सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई आयोजना अघि बढाउने संकेत गरेपछि नेपाली पक्ष उत्साहित भएको छ ।
चीनले यसअघि नेपाली पक्षले बीआरआईमा समेटिने परियोजनाको स्पष्ट खाका नदिएको गुनासो गर्दै आएको थियो । नेपाली पक्षको भने परियोजनामा चिनियाँ पक्षबाट बेवास्ता भइरहेको गुनासो छ । विदेशमन्त्री वाङले नेपालबाट छनोट भएका परियोजनामा प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेको बताइएको छ । यसअघि नेपालले लैजाने परियोजनामा चीनले कुनै न कुनै रुपमा अड्को थापेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बीआरआई सम्झौता भएको दुई वर्ष चार महिना भइसक्दा पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसको म्याद आगामी वैशाखसम्म छ । तीनवर्षे परियोजना सम्झौता २०७४ वैशाख २९ मा भएको थियो । त्यसअन्तर्गत विभिन्न नौ परियोजना चयन भएका थिए ।
विदेशमन्त्री वाङले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटमा बीआरआई परियोजनामा चीन सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘नेपाल चीनको सदाबहार मित्र हो । हामी सधंै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । लामो समयदेखिको चिनियाँ उच्चस्तरको भ्रमणको दुरी पनि अब पूरा हुनेछ,’ विदेशमन्त्री वाङलाई उधृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘चीन छिमेकलाई साथ लिएर विकास गर्न चाहन्छ । हामी एउटै क्षेत्र र उही परिवेशमा छौं । विकासमा सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिको विषय उठाएकी थिइन् । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।‘भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यसबेला भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सहमतिअनुसार अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए । ‘दुईपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष छन् । शैक्षिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकासलगायत सबै क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने र चीनले नेपाललाई महत्वका साथ हेर्दै अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल खुसी छ,’ ओलीलाई उधृत गर्दै डा. भट्टराईले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमन्त्री वाङलाई नेपाल एक चीन नीतिका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले विगतमा भएका सम्झौता अघि बढाउने र सहकार्य गर्दै पर्यटन, लगानी र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा काम अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ : वाङ
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति सीले चाँडै नै नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका छन् । ‘चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी हुँदैछ । त्यो भ्रमण उपयुक्त समयममा हुने नै छ,’ विदेशमन्त्री वाङलाई उद्धृत गर्दै सल्लाहकार भट्टराईले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण चाँडो होस् भन्ने चाहेको स्मरण गराएलगत्तै वाङले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले सबै जसो भेटभाटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण छिट्टै हुने बताएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको विषयमा लामै छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न पाउनु गौरवको विषय हो भन्दै यसबाट द्विपक्षीइ सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताएकी थिइन् ।
ओलीलाई सीको सन्देश
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली खच्याङले सुस्वास्थ्यको कामनासहित सफलताको शुभकामना पठाएका छन् । उनीहरुको सन्देश शिष्टाचार भेटमा विदेशमन्त्री वाङले पढेर सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली दुई दिनअघि मात्र सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्केका थिए । नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा विकास परियोजनासमेत अघि बढिरहेको उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
ठोस परियोजना ल्याउन माग
नेपालले चीनसँग विकासका ठोस परियोजना प्रस्ताव नराखेको गुनासो विदेशमन्त्री वाङले गरेका छन् । ‘नेपालले कुनै पनि प्रस्ताव नहिचकिचाईकन राख्न सक्छ तर त्यस्तो सौभाग्य चीनले पाएको छैन’, उनले भने । दुई पक्षीय वार्तामा प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र सडक संरचनामा छलफल भएको थियो । यस्तै कोदारी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–कोदारी खण्डको स्तरोन्नति र रसुवागढी–ठोरी करिडोर निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षले बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी खण्डको स्तरोन्नति र टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको थियो ।
सबै भेटमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । रेलमार्ग चीनको सहयोगमै बनोस् भन्ने नेपाली चाहना छ । वार्तामा यसअघि सहमति भएर सम्पन्न हुन नसकेका परियोजना र विगतमा भएका सन्धिसम्झौता अघि बढाउन चीन सकारात्मक देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआरआई परियोजनाबारे भने औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
चीनले हासिल गरेको भौतिक एवं आर्थिक विकासबाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको दुईपक्षीय वार्तामा यस्तो छलफल चलेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विदेशमन्त्री वाङबीच द्विपक्षीय हित, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मामिलामा समान धारणा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । दुई देशका मन्त्रीबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता, नेपालको व्यापार विविधीकरण, व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ सहयोगलगायतमा छलफल भएको परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
मनाङमा अस्पताल बनाउन चिनियाँ सहयोग
चीनले सीमा जोडिएको मनाङमा अस्पताल बनाइदिने भएको छ । मनाङ अस्पताल पुनर्निर्माणका लागि चीनले दुई करोड २० लाख युआन (रु.३५ करोडभन्दा बढी) सहयोग गर्नेछ ।परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र विदेशमन्त्री वाङको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (सीआईसीडीए) का उपाध्यक्ष डेङ बोकिङले आपत्कालीन आवास तथा मनाङ अस्पताल पुनर्निर्माण परियोजनासम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । आपत्कालीन आवास सहायताअन्तर्गत चीनले ९५ लाख युआन बराबरका पाँच हजार त्रिपाल उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै स्वयंसेवक चिनियाँ शिक्षक कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा शिक्षा सचिव महेश्वर दाहाल र चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार चिनियाँ शिक्षा अध्ययनका चीनले सरकारी विद्यालयमा स्वयंसेवक पठाउनेछ । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीसहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पररराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, राजदूत लीलामणी पौड्याल लगायत थिए । यस्तै विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको टोलीमा विदेशसचिव लु झाउबी, सीआईसीडीएका उपाध्यक्ष डेङ बोकिङ, राजदूत हउ यान्छी, विदेश मन्त्रालयको एसिया विभागका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।
चन्द्रगिरि पुगे वाङ
विदेशमन्त्री वाङको टोली सोमबार बिहान चन्द्रागिरी हिल पुगेको थियो । टोलीले केहीबेर चन्द्रागिरिमा केही बेर हाइकिङसमेत गरेको थियो । विदेशमन्त्री वाङले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार बिहान मेरियट होटलमा छुट्टाछुट्ट भेट्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनी स्वदेश फर्कनेछन् ।